Elk သည် Real-Time Remote ဂီတဖန်တီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် Aloha ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Elk သည် Real-Time Remote ဂီတဖန်တီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် Aloha ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
၂၀၂၀ ဂုတ် ၁၁ - ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်း ဆတ်ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးဆုရ Elk Audio Operating System (OS) ကိုတီထွင်သူများသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဝေးလံသောတေးဂီတဖန်တီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို၎င်း၏ကြေငြာချက်များနှင့်ကြေငြာ Aloha ဆတ်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ “ အတူတကွ” ကိုဂီတထဲပြန်ထည့်ပြီး Aloha သည် virtual platform တစ်ခုဖြစ်သည့်စတူဒီယို၊ အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်း၊ စင်မြင့်နှင့်စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ နေရာအမျိုးမျိုးမှဂီတသမားများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပညာရှင်များကိုအခန်းတစ်ခန်းတည်း၌ကဲ့သို့ဖန်တီးရန်၊ အစမ်းလေ့ကျင့်ရန်နှင့်ဖျော်ဖြေရန်ခွင့်ပြုသည်။ Ultra-low latency ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်နှင့် 5G ကွန်ယက်များပေါ်တွင် အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများသည်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအတူတကွကစားနိုင်ပြီးစည်းညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခုတော့ Watch: Aloha ကိုမိတ်ဆက်
“ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့ငလျင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပလက်ဖောင်းတွေကိုဂီတလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းမထားဘူး၊ အခြေခံအကျဆုံးမှာအတူတူဂီတကိုဖန်တီးချင်တယ်၊ ဂီတဖန်တီးချင်သူတွေ၊ ဂီတသမားတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ Michele Benincaso, Elk Audio တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဖော်ပြသည်။ Aloha နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဂီတနှင့်ဂီတတူရိယာများအားလုံးကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုထပ်တူပြုခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာဂီတသမားတွေစောင့်နေတဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွေ့အကြုံပါ။ ” Benincaso ကအသစ်သောပူဇော်သက္ကာအတွက်သူ၏ရူပါရုံကိုအကျဉ်းချုပ်,Aloha သည် 5G ကမ်းလှမ်းထားသောကတိတော်များနှင့်အတူယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းကုန်ပြီသို့ဂီတလောကသို့ပို့ဆောင်သောဖန်တီးမှုချိတ်ဆက်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ”
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်အင်တာနက်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ဂီတသမားများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပညာရှင်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီတည်ငြိမ်သည့်အသံလိုအပ်သည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကြာရှည်မှုသည်မမှန်မကန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးသည်အတူတကွကစားလိုသောဂီတသမားများအတွက်မသင့်တော်ပါ။ Aloha သည်တည်ငြိမ်သောမီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအသံ latency ကိုယူဆောင်လာသည်။ အသုံးပြုသူများကိုနေရာအမျိုးမျိုးမှ ဆက်သွယ်၍ သူတို့ဖန်တီးလိုသောတီထွင်ဖန်တီးမှုတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့များနှင့်စီမံကိန်းများစွာတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Aloha သည်ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှသီချင်းများအားပြန်လည်နားထောင်ခြင်းမှသည် grooving and improvising အထိအခြားဂီတသမားများနှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းခွင့်ပြုသည်။ မကြာသေးမီက Yamaha မှကမကထပြုသူ Nils Landgren နှင့်အတူအချိန်ကာလအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Aloha ကို အသုံးပြု၍ ကီလိုမီတာ ၆၇၀ (မိုင် ၄၅၀) ကွာဝေးသောနေရာတွင်ကစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်အချိန်မှာဂီတကိုတီးခတ်နိုင်ရုံသာမကဘဲခရီးသွားခြင်းနှင့်စတူဒီယိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်း - Aloha မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ -Robert Mehmet Ikiz, လွတ်လပ်သောဒရမ်သမား, Yamaha အဆိုတော်။
Aloha ၏အိတ်ဆောင်အရွယ်အစားကိရိယာနှင့် app သည် Elk Audio OS ၏လျှပ်စီးမြန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အစွမ်းထက်သောအသံပရိုဆက်ဆာနှင့်အသုံးပြုသူများကိုအရည်အသွေးပြည့်ဝသောအသံအတွေ့အကြုံနှင့်ထပ်တူပြုနိုင်စေရန်. ဂီတပညာရှင်များကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော Aloha app တွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုထိန်းချုပ်မှုများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဗွီဒီယို chat အတွေ့အကြုံနှင့်လူကြိုက်များသောလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှထုတ်လွှင့်ရန်ရွေးချယ်စရာများတို့ပါဝင်သည်။ Ultra-low latency hardware device သည်မည်သည့် gig bag တွင်မဆိုအလုံအလောက်လုံလောက်ပါသည်။
Aloha 5G - ဂီတအတွေ့အကြုံအသစ်
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အတွက်ယနေ့အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော Elk မှအဖွဲ့သည် 5G ဂေဟစနစ်အတွင်း Aloha ကိုစမ်းသပ်ရန် telcos နှင့် 5G ရှေ့ဆောင်များနှင့်အတူလက်တွဲပြီးဂီတသမားများနှင့်တေးဂီတလုပ်ငန်းအတွက်အလားအလာအသစ်များရရှိစေသည်။
Vodafone Group မှ Group Network Architecture ၏အကြီးအကဲ Santiago Tenorio ကမှတ်ချက်ချသည်။ “ ခန့်မှန်းရခက်သောသော့ခတ်မှုများကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနုပညာရှင်များသည်သူတို့၏ဂီတစွမ်းရည်များပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ပရိသတ်များနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုမြန်သောအနိမ့်အမြန်ဖိုင်ဘာနှင့် 5G ကွန်ယက်များ၊ Elk မှ Aloha ကဲ့သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဤအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဂီတသမားများနှင့်ပရိတ်သတ်များပင်လျှင်ကမ္ဘာ၏မတူညီသောနေရာများမှချက်ချင်းပူးပေါင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂီတလုပ်ငန်းနှင့်အခြားကဏ္inများတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်မတူကွဲပြားမှုလှိုင်းသစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။ လက်ရှိအခက်အခဲတွေကြားမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ”
Elk သည်၎င်း၏ Aloha 5G နည်းပညာအယူအဆကို 2019 ခုနှစ်တွင် Mobile World Congress ပြပွဲ၌ပြသခဲ့သည် Ericsson က Vodafone နှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်aVodafone နှင့်အတူစပိန်နိုင်ငံတွင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု.
Benincaso မှ 5G ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအလားအလာကိုနိဂုံးချုပ်ပြောကြားသည်။ "မြန်နှုန်းမြင့်မြန်နှုန်းမြင့် Aloha သည်ဂီတပညာရှင်များ၊ 5G ၏အမှန်တကယ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူ Aloha သည်ဖျော်ဖြေမှုများကိုကစားခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် virtual reality အပါအ ၀ င်ဖျော်ဖြေမှုများမှအသံအတွေ့အကြုံသစ်များကိုအစွန်းကွန်ပျူတာများ၏စွမ်းအားဖြင့်အပြည့်အ ၀ သယ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ”
Elk ပွင့်လင်း beta ကိုအားဖြင့် Aloha
Elk သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် Q4 တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသော Aloha ဖွင့်လှစ် beta ပရိုဂရမ်ကိုစတင်ရန်စီစဉ်နေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ alohabyelk.com.
ဆတ် ချိတ်ဆက်ဂီတတူရိယာများနှင့်အသံထုတ်ကုန်များ၏မျိုးဆက်သစ်ကိုဖွင့်နိုင်သည့်နည်းပညာများကိုတီထွင်သည့်စတော့ဟုမ်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Elk ၏ရည်မှန်းချက်မှာဂီတပညာရှင်များနှင့်နည်းပညာအကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးရန်၊ ဂီတကိုမည်သို့သင်ယူရန်၊ မည်သို့ဖန်တီးရန်၊
ယခင်: Colorist Awards ကိုစတင်ရန်လွတ်လပ်သောအရောင်အသွေးစုံလင်သောအဖွဲ့နှင့် CSI မိတ်ဖက်များ
နောက်တစ်ခု: Matthews ၏ Intro ၏ Gobo Plate ™ Mount Adapter